စာကြည့်တိုက် – NMDC
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ်ကို ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့သော်လည်း စာကြည့်တိုက်ကို ၂၀ဝ၅ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီ ကောလိပ် စာကြည့်တိုက်ဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် စာကြည့်တိုက်ကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ကုန်သည်လမ်း နှင့် ၅၄ လမ်းထောင့်အမှတ် ၂၇၃၊ ၂၇၉ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ပင်မဆောင်အောက်ထပ်အခန်းနံပါ တ် (NMC-105,106,107) တွင် ဖွင့်လှစ် ထားပါသည်။
စာကြည့်တိုက်ကို တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ၉း၃၀ မှ ၆းဝ၀ ထိဖွင့်လှစ်ထားပြီး စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပိတ်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်မှူးမှာ ဒေါ်အေးအေးမွန်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း(၄)ဦးရှိပါသည်။စာကြည့်တိုက်၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်သောစာငှါးလုပ်ငန်း၊ရည်ညွှန်းလုပ်ငန်း e-library ၊လုပ်ငန်းနှင့်စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု့လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
စာကြည့်တိုက်တွင်စာအုပ်ပေါင်း(၂၀ဝဝဝ)ခန့်ရှိပြီး၊မြန်မာစာအုပ်(၃၀ဝဝ)ခန့်၊အင်္ဂလိပ်စာအုပ်(၉၀ဝဝ)ခန့်၊ မြန်မာမဂ္ဂဇင်း(၃၀ဝဝ)ခန့်၊ အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်း(၁၀ဝဝ)ခန့်၊ မြန်မာဂျာနယ်(၂၀ဝဝ)ကျော်၊ အင်္ဂလိပ်ဂျာနယ် (၁၀ဝဝ)ခန်၊ e-book (၁၀ဝဝ)ခန့်ရှိပါသည်။ Term Paper များ၊ မေးခွန်းဟောင်းများလည်း စုဆောင်ထား ရှိပါသည်။
ဤကောလိပ်မှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ ဝန်ထမ်းသည် စာအုပ်များကို ငှါးရမ်းနိုင်ပါသည်။
ဆရာ၊ဆရာမ ၅အုပ် ၁လ
ဝန်ထမ်း ၂အုပ် ၁၀ရက်
ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ် ၂အုပ် ၁၀ရက်
တတိယနှစ်၊စတုတ္ထ ၃အုပ် ၁၀ရက်
ပြင်ပမှ သုတေသနပညာရှင်များနှင့်စာဖတ်သူများကို စာကြည့်တိုက်တွင်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် စာကြည့်တိုက်တွ င် Access high quality e-resources အသုံးပြုနိုင်ရန်အ တွက် Myanmar – Luxembourg Development Cooperation နှင် EIFL အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်း၍ EBSCO Discovery Service ဖြင် e-book များ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ရန် သင်တန်း ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း e-Library Software တွင် Journal ပေါင်း ၃၀ဝ ကျော် e-book ပေါင်း(၁၅၀ဝဝဝ)ကျော်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
9:30 am to 4:30 PM (Monday –Friday)
[P.S.: closed on gazette holidays]
No. 273,279 Marchant Road, Botataung Township, Yangon
Fax – +951200693
E-mail – nmdc.library@gmail.com